Iinkqubo zemveliso zase China zabenzi bentsimbi kunye nabathengisi | IShencai Pigment
I-Iron oxide etyheli yimpuphu ebonakalayo ye-pigment yellow. Ukuxinana kwesihlobo yayiyi-3.5. Iimpawu zeekhemikhali zizinzile. Ubungakanani beengqimba ngu-0.01-0.02 μ M. Inendawo enkulu ethile (malunga namaxesha ali-10 e-oxide yesiqhelo yentsimbi), ukufunxwa okuqinileyo kwe-ultraviolet, ukumelana nokukhanya, ukumelana nomoya kunye nezinye iipropathi ezilungileyo. Ifilimu iyabonakala kwaye ineempawu ezintle. Uyenza njani i-iron oxide yellow?
Indlela: i-ferrous sulfate oxidation indlela: i-acid ye-sulfuric iphendula nge-iron filings ukwenza i-ferrous sulfate. Isodium hayidroksayidi yongezwa kwaye umoya usetyenziselwa ukwenza ioksijini ukulungiselela ikristal nucleus. I-Ferrous sulfate kunye ne-chips zentsimbi ziyongezwa ekumisweni kwekristal nucleus, ifudunyezwe kwaye ivuthelwe emoyeni kwi-oxidation. I-Ferric oxide etyheli ilungiswe ngoxinzelelo, ukucoca, ukomisa kunye nokugaya.
I-FeSO4 · 7H2O + O2 → 2fe2o3 · H2O ↓ + 4h2so4 + 2H2O iimeko zokuphendula yongezwa kwisisombululo sesalferi, kunye ne-40% yentsimbi iyonke iguqulwa yenziwa yi-ayidroksayidi yentsimbi [Fe (OH) 2] ngokuqhubeka okunyusayo, kwaye isinyithi sidibene ne-Fe ukwenza ikristal nucleus kwi-30 ~ 35 ℃. Emva koko i-90 g / L yentsimbi yokufakelwa yongezwa kumxube ukwenza i-7 g / L yekristale yenyani kunye ne-40 g / L ye-ferrous sulfate, emva koko yatshiswa kwi-85 ℃ ye-oxidation yomoya ngesantya se-600 L / h nge-64 h, kunye emva koko yahluzwa, yahlanjwa, yomiswa kwaye ityunyuziwe ukuze ifumane umbane otyheli.